Hello Nepal News » आज बार्सिलोना र एथ्लेटिको मड्रिडको ‘महाभिडन्त’ हुँदै : कसले मार्ला बाजी ?
आज बार्सिलोना र एथ्लेटिको मड्रिडको ‘महाभिडन्त’ हुँदै : कसले मार्ला बाजी ?
स्पेनिस ला लिगा फुटबल प्रतियोगितामा आज राति एक ठूलो खेल हुँदैछ । जहाँ लिगका दुई बलिया टोली बार्सिलोना र एथ्लेटिको मड्रिडको महाभिडन्त हुनेछ । लिगको ३३औं साताको खेल खेल्न दोस्रो स्थानको बार्सिलोनाले तेस्रो स्थानको एथ्लेटिकोलाई आफ्नो घरेलु मैदान क्याम्प नोउमा स्वागत गर्दैछ । खेल नेपाली समयअनुसार राति १ः४५ बजेबाट सुरु हुनेछ । खेल ला लिगाको अफिसियल फेसबुक पेजबाट लाइभ हेर्न सकिनेछ ।
उपाधि होडमा रहेको बार्सिलोनाका लागि आजको खेल खेल्न बाँकी ६ खलमध्ये सबैभन्दा कठिन खेलका रूपमा हेरिएको छ । यो खेल एथ्लेटिकोभन्दा पनि बार्सिलोनाका लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुनेछ । जारी सिजनको उपाधि होडमा आफू रहने वा नरहने भन्ने कुराको छिनोफानो बार्सिलोनाका लागि यही खेलले गर्नेछ ।
बार्सिलोना ३२ खेलपछि रियल मड्रिडभन्दा २ अंकले पछि छ । यदि आज राति एथ्लेटिकोलाई पराजित गर्न सके बार्सिलोनाले आफूलाई उपाधि होडमा जीवितै राख्नेछ । तर, यदि पराजित भए वा बराबरीमा रोकिएको ला लिगा उसको हातमा करिब–करिब फुत्किनेछ । तसर्थ, उपाधि होडमा रहन र रियलमाथि दबाब कायमै राख्न पनि बार्सिलोनाले आजको खेलमा अनिवार्य रूपमा स्पष्ट जित निकाल्नैपर्छ ।
कोरोना भाइरसपछि लिग सुचारु भइकन आफूले खेलेका पाँच खेलमध्ये बार्सिलोनाले तीन खेल जितेर दुई खेल बराबरी गरेको छ । पछिल्ला खेलको कमजोर प्रदर्शन र खराब नतिजाबाट बार्सिलोना आलोचित बनिरहेको छ । खेलको नतिजाका कारण टोलीमा प्रशिक्षक र खेलाडीबीच विवादसमेत सुरु भएको खबर आइरहँदा आज एथ्लेटिकोविरुद्ध बार्सिलोना चर्को दबाबमा हुनेछ ।
लिगकै एक बलियो टोलीविरुद्ध आज उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर स्पष्ट जित निकाल्न नसके आफ्नो हातबाट ला लिगा उम्किने अवस्था बुझेको क्विके सेटिनको टिम आज घरमा जितका लागि ‘गर वा मर’ को अवस्थामा हुनेछ । यसअघि भएको सिजनको पहिलो भेटमा बार्सिलोनाले एथ्लेटिकोलाई उसैको घरमा ०–१ ले हराएको थियो । सो खेलमा कप्तान लिओनल मेस्सीले खेलको ८६औं मिनेटमा १ मात्रै विजयी गोल गरेका थिए ।
तर, एथ्लेटिको त्यही टिम हो, जसले बार्सिलोनालाई यसै सिजन मात्रै स्पेनिस सुपर कपको सेमिफाइनलमा नमिठो हार चखाउँदै उपाधि होडबाट आउट गराएको थियो । आज बार्सिलोनाको घरमा उत्रिँदा एथ्लेटिको घरेलु टोलीविरुद्ध यसअघिकै अर्को सनसनीपूर्ण जितको खोजीमा हुनेछ ।
यसै सिजन बार्सिलोनालाई एक खेलमा हराइएसकेको र च्याम्पियन्स लिगमा साबिक विजेता लिभरपुललाई सनसनीपूर्ण रूपमा हराएर उपाधि होडबाट आउट गराएको एथ्लेटिकोलाई आज घरमा स्वागत गर्दा बार्सिलोना स्वभाविक रूपमा चर्को दबाबमा हुनेछ । पछिल्ला खेलको खराब प्रदर्शन र नतिजा तथा हालकै दिनमा टोलीमा देखिएका समस्याबीच उसले एथ्लेटिकोविरुद्ध कस्तो प्रदर्शन गर्छ भन्नेमा धेरैको चासो छ ।
प्रकाशित मिति १६ असार २०७७, मंगलवार ०४:००